Umqeqeshi uzihoxisile izikhalazo zakhe kulandela ukudliwa koweTelkom | News24
Umqeqeshi uzihoxisile izikhalazo zakhe kulandela ukudliwa koweTelkom
EThekwini - Umqeqedhi weChippa United uTeboho Moloi usewahoxisile amazwi akhe aziswana awasho ngemuva komdlalo wabo neKaizer Chiefs.
Lo mqeqeshi wayengaphathekile kahle ngemuva kokushaywa amaKhosi ngo-1-0 emdlalweni we-Telkom Last 8 enkundleni iNelson Mandela Bay ngeSonto mhlazingu-5 kwephezulu.
Ngokusho kwakhe uMoloi uthi: “Ngithanda ukukuhoxisa engakusho ngemuva komdlalo wethu neKaizer Chiefs nesikhathi ngiphawula ngezinsuku zami ngisadlalela i-Orlando Pirates (phakathi kuka-1987no-1992). Ngaphawula ngokungafanele, amaphaphu esaphezulu kakhulu."
OLUNYE UDABA: Abathandi bebhola bazoyithokozela imititilizo yokuvotela ama-PSL Awards
Lomqeqeshi watshela abe-SuperSport TV ukuthi: "Angivamile ukukhalaza ngonompempe noma ukusingathwa komdlalo. Ngiseyingane esakhasa futhi ngisemusha kule ndima, ngakho-ke ukukhalaza ngokusingathwa komdlalo akungifanele okwamanje.
“Angizukukhalaza, kodwa engingakusho wukuthi ngikhumbula ngisadlala ngeminyaka ka-1987 kut ku-1992, uma sidliwa yiKaizer Chiefs yayisidla ngayo le ndlela.”